Politika – Politika
Catégorie : <span>Politika</span>
5 novembre 20197 mai 2020Politika
Fanamby goavana: ilay ho ben’ny tanànan’ny Kaominina Antananarivo renivohitra (CUA) atsy ho atsy sy ireo ho mpanolotsainan’ny tanàna dia hiloloha adidy mavesatra hamelombelona indray sy hanarina ny renivohitr’i Madagasikara izay sempotra sy tafiditra anatina vela-pandrika marobe samihafa eo an-dàlana mankany amin’ny fandrosoana. “Iainana isan’andro vaky ny fahavoazana tsy maintsy atrehina, toy ny tsy fandraofana ny...
20 août 20197 mai 2020Politika, Tafatafa
« Na dia ambany aza ny tahan’ny fandraisana anjara tamin’ny fifidianana dia voafidy tamin’ny ara-drariny izahay » Anisan’ny tanan’ankavanan’i Andry Rajoelina i Christine Razanamahasoa, ary lany ho filohan’ny Antenimierampirenena izy. Voafidy mora foana izy tany amin’ny fari-pifidianana misy azy. Mpikatroka mahatoky izy. Heverina fa ‘valim-piakarana fidinana’ ho azy izao fiverenany ao amin’ny Antenimierampirenena izao. Nihaona taminy izahay,...
Nomarihan’ireo firenena mpikambana amin’ny Vondrona afrikana (UA) tamin’ny fomba ofisialy ny fampiharana ny fifanarahana momban’ny fametrahana ny Faritra ifanakalozana malalaka na Zlec nandritra ny fivoriana natao tao Niamey, renivohitry Niger ny 7jolay lasa teo. Araka izany, efa mandeha amin’ny fomba ofisialy io tsenam-barotra lehiben’ny Afrikana io. Hita eny amin’ny endriky ny Filoha Andry Rajoelina ny...
Azo lazaina ho toy ny vara-datsaka ho an’ny mpanara-baovao tokoa ilay fanambarana niarahan’ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nanao tamin’ny valan-dresaka nataon’izy ireo ho an’ny mpanao gazety mahakasika ny Nosy Eparses. « Amin’ny anaran’ny vahoaka malagasy no angatahako amin’ny fomba ofisialy sy ampahibemaso amin’Andriamatoa prezidà (Emmanuel Macron) hitady vahaolana ho an’ny...
Noho ireo soatoavina maha olombelona maro izay raiketany sy ny fahombiazany amin’ny fanambarana ny mpankafy amina fihetsem-po iray sy hambom-pirenena, ho an’ny firenena maro dia zary fitaovan-tserasera mahomby ampiasaina amin’ny diplomasia ny fanatanjahantena. Fandravàna fanafihana, baolina saika maty fa tsy tafiditra tanaty harato, fandakàna “tirs au but”… Ireny pitsopitsony ireny matetika no mampiavaka ny tantara...
Fiverenana an-doharano. “Mihevitra ireo izay nanangana ny IEM fa ny ‘fitovitoviana eo amin’ny lafiny kolontsaina’ izay misy eo amin’i Madagasikara sy ny firenena aostronezianina dia toe-java-misy tokony ho fanararaotra amin’ny alalan’ny Asean eo amin’ny sehatry ny kolontsaina, ny diplomasia sy ny toekarena. Mifaka amina tsangan-kevitra azo tanterahina ve izany sa nofy antoandro fotsiny ihany? “Toe-tsaina...
Misy sy miandry hatrany ny fanamby politika sy ara-toekarena ary ny fiovan’ny toe-java-misy eran-tany. I Madagasikara manoloana izany dia toa mizotra amin’ny lalana mitondra mankany amin’ny fiaraha-miasa eo amin’ny habaky ny kaontinanta sy eo amin’ny fisokafana any amin’ny firenena mpiara-miombon’antoka. Ny fitaovam-piadiana diplomatika ananany no tokony hampahavitrika azy amin’izany. Mbola tsy mahomby tanteraka anefa ilay...